4 Ehud wu akyi no, Israelfo fii ase yɛɛ bɔne wɔ Yehowa ani so bio.+ 2 Enti Yehowa tɔn+ wɔn hyɛɛ Kanaan hene Yabin a na odi hene wɔ Hasor+ no nsa. Ná ne sahene ne Sisera,+ na na ɔte Haroset-Hagoyim.+ 3 Na Israelfo fii ase su frɛɛ Yehowa,+ efisɛ na ɔwɔ dade nteaseɛnam+ ahankron na ɔhyɛɛ Israelfo no so+ denneennen mfe aduonu. 4 Saa bere no na Lapidot yere Debora a ɔyɛ odiyifobea+ no na obu atɛn wɔ Israel. 5 Ná ɔte Debora abedua ase wɔ Rama+ ne Betel+ ntam, Efraim bepɔw so, na na Israelfo no kɔ ne nkyɛn kogye atemmu. 6 Na ɔsoma ma wɔkɔɔ Kedes-Naftali+ kɔfrɛɛ Abinoam ba Barak+ bae, na ɔka kyerɛɛ no sɛ: “So Israel Nyankopɔn Yehowa nhyɛɛ wo anaa? ‘Fa mmarima mpem du fi Naftali+ ne Sebulon+ mmusua mu ka wo ho kɔ Bepɔw Tabor+ so. 7 Na mɛtwetwe+ Yabin+ sahene Sisera+ ne ne nteaseɛnam ne ne dɔm aba wo nkyɛn wɔ Kison subon+ no ho, na mede no bɛhyɛ wo nsa.’”+ 8 Ɛnna Barak ka kyerɛɛ no sɛ: “Sɛ wo ne me bɛkɔ a, ɛnde mɛkɔ, na sɛ wo ne me ankɔ a, ɛnde me nso merenkɔ.” 9 Na ɔka kyerɛɛ no sɛ: “Ɛnyɛ den, me ne wo bɛkɔ. Nanso anuonyam a ebefi akwantu no mu aba no renyɛ wo dea, efisɛ ɔbea+ na Yehowa de Sisera bɛhyɛ ne nsa.” Afei Debora sɔre ne Barak kɔɔ Kedes.+ 10 Na Barak boaboaa Sebulon+ ne Naftali ano baa Kedes, na mmarima mpem du dii n’akyi kɔe;+ na Debora nso kaa ne ho kɔe. 11 Saa bere no na Kenini barima bi a ɔde Heber+ atew ne ho afi Kenifo+ a wɔyɛ Mose ase Hobab mma+ no ho, na okosii ne ntamadan wɔ odupɔn bi ho wɔ Saananim wɔ Kedes. 12 Ɛnna wɔkɔka kyerɛɛ Sisera sɛ Abinoam ba+ Barak aforo kɔ Bepɔw Tabor+ so. 13 Ntɛm ara na Sisera boaboaa ne nteaseɛnam nyinaa, dade nteaseɛnam ahankron no,+ ano, na ɔboaboaa nnipa a wɔka ne ho nyinaa ano fi Haroset-Hagoyim baa Kison subon+ no ho. 14 Afei Debora ka kyerɛɛ Barak sɛ: “Sɔre ntɛm! Ɛnnɛ na Yehowa de Sisera bɛhyɛ wo nsa. Wunnim sɛ Yehowa adi w’anim dedaw?”+ Ɛnna Barak de mmarima mpem du dii n’akyi sian fii Bepɔw Tabor so. 15 Na Yehowa maa Sisera ne ne nteaseɛnam ne n’asraafo nyinaa de wɔn ti pempemee,+ na wɔtotɔɔ nkrante ano wɔ Barak anim. Afei Sisera si fii ne teaseɛnam mu guanee. 16 Barak tiw+ nteaseɛnam+ ne asraafo no koduu Haroset-Hagoyim, na Sisera asraafo no nyinaa totɔɔ nkrante ano. Obiako mpo anka.+ 17 Sisera+ de, oguan kɔɔ Kenini+ Heber yere Yael+ ntamadan mu, efisɛ na asomdwoe wɔ Hasor+ hene Yabin ne Kenini Heber fiefo ntam. 18 Na Yael fii adi behyiaa Sisera, na ɔka kyerɛɛ no sɛ: “Me wura, man fa ha bra me nkyɛn; nsuro.” Enti ɔman kɔɔ ne nkyɛn wɔ ntamadan no mu, na ɔde kuntu kataa no so. 19 Afei ɔka kyerɛɛ ɔbea no sɛ: “Osukɔm de me; mesrɛ wo, ma me nsu kakra nnom.” Ɛnna ɔbea no buee nufusu kotoku+ ano hwiee bi ma ɔnomee,+ na ɔsan kataa no so. 20 Ɔka kyerɛɛ ɔbea no bio sɛ: “Kogyina ntamadan no ano, na ebia obi bɛba abebisa wo sɛ, ‘Ɔbarima bi aba ha?’ Obisa saa a, ka sɛ ‘Dabi!’” 21 Afei Heber yere Yael kɔfaa ntamadan pɛɛwa ne asae. Na bere a Sisera abrɛ na wada hatee no, ɔbea no wiawiaa ne ho kɔɔ ne nkyɛn, na ɔde asae no bɔɔ pɛɛwa no so wuraa n’asontɔrem+ ma esii fam. Enti owui.+ 22 Saa bere no nyinaa na Barak retiw Sisera. Na Yael behyiaa no ka kyerɛɛ no sɛ: “Bra na menkyerɛ wo ɔbarima a worehwehwɛ no no.” Enti ɔkɔɔ ɔbea no nkyɛn, na ɔnkɔhwɛ a, Sisera na wawu da hɔ a pɛɛwa tua n’asontɔrem yi! 23 Enti saa da no, Onyankopɔn brɛɛ Kanaan hene Yabin ase maa Israelfo no.+ 24 Na Israelfo maa wɔn nsa yɛɛ duru wɔ Kanaan+ hene Yabin so kosii sɛ wokum Kanaan hene+ Yabin.